အောက်ပါပွဲများတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုပြသသည့် အဓိကနိုင်ငံတကာပြပွဲများနှင့် ညီလာခံများတွင် ပါဝင်ပါသည်။
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ရန် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များထံမှ ဂရုတစိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ချိန်ညှိနိုင်စေရန် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြပွဲတွင် ပါဝင်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ချန်နယ်များမှ သင့်ကို အကြောင်းကြားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် SIAVS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်နှင့် ဝက်သားပြပွဲ 2022 ကို တက်ရောက်ပါမည်။
Venue: Anhembi Parqueဆောပိုလို၊ ဘရာဇီး
သင့်ဥများကို အဖိုးတန်စီးပွားရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲရာတွင် သင့်အား မည်သို့ကူညီပေးနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏တဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုပါ။
၏ website ကိုသွားပါ။ SIAVS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်နှင့်ဝက်သားပြပွဲ ပိုပြီးဖတ်ပါရန်။
SANOVO TECHNOLOGY ASIA သည် Livestock Philippines တွင် တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်း 30 ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မွေးမြူရေး၊ အစာကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အသားစက်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်း အချက်အလက်များဖြင့် လှုံ့ဆော်မှုရယူပါ။
မှတ်ပုံတင်ပြီး သင့်လက်မှတ်ကို ရယူလိုက်ပါ။ ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြန့်ဖြူးသူ AVYAPY နှင့် ပူးပေါင်း၍ SPACE 2022 တွင် ရှိနေပါမည်။
အဆိုပါပွဲကို တိရစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ သုခချမ်းသာကို အဓိကထားကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
Venue: Rennes Parc-ကုန်စည်ပြပွဲ, ပြင်သစ်
၏ website ကိုသွားပါ။ အာကာသ.
Ildex Indonesia 2022 တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
အချက်အလက်များပိုမိုလိုအပ်ပါသလား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Ildex အင်ဒိုနီးရှား